Dowlada Mreykanka oo ka hadlay Weerarkii ka dhacay Muqdisho. |
Dowlada Mreykanka oo ka hadlay Weerarkii ka dhacay Muqdisho.
War-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska Madaxweynaha Mareykanka Barak Obama ayaa lagu sheegay in madaxweyne Obama aad uga xunyahay weerarkii argagixiso ee shalay lagu qaaday xarunta Hey’adda UNDP ee magaalada Muqdisho, wuxuuna Obama u tacsiyeeyay dadkii ku waxyeeloobay weerarkaasi ee isugu jiray ajaanibta iyo Soomaalida.
“Mareykanku aad ayuu uga xunyahay waxa dhacay. Waa wax laga noxo dhibaatadii kaa dhacay xarunta Qaramada Midoobay ee Soomaaliya. Waxaan kordhin doonaa qorsha amaanka lagu sugayo ee dowlada Soomaaliya aan ku taageereyno”, Obama ayaa yiri arintaasi.
Madaxweyne Obama ayaa sheegay in dowladiisu ay sii wadi doonto taageerada ay siiso dowlada Federaalka Soomaaliya, isagoo ugu hambalyeeyay ciidamada dowladda sida farsameysan oo ay uga hortageen weeerarkii shalay lagu qaaday xarunta Hey’adda UNDP, isaga oo hoosta ka xariiqay in ciidamada amaanka ee dalka Soomaaliya iyo Ciidamada AMISOM ay qabteen howlah muhiim kadib amrkii kooxihii weerarka qaaday ay ugu danbeyn laayeen.
Kooxda Shabaab ayaa waxa ay shalay weerar gaadma ah ku qaaday Xarunta UNDP ee Muqdisho, iyaga oo markii ugu horeysay sameeyay qarax xooggan oo irida hore ka dhacay kadibna dagaalamayaal Hubeysan oo wata tuutaha qaranka ay gudaha u gelaan halkaasi oo ay ku dileen shaqaale isugu jirana ajaanib iyo Soomaali.
Weerarkaasi waxa uu ahaa mid kamid ah qorshayaashii ugu casrisanaa ee Shabaab ay ku guuleestaan, iyaga oo gudaha u galay mid kamid ah xarumaha sida aadka ah loo ilaaliyo.